Ny vorona virjina Virginia ( Glaucomys sabrinus fuscus ) dia manana volo marevaka mena ary matevina matevina eo amin'ny kibony. Ny masony dia lehibe, miharihary ary maizina. Ny rambon'io hoditra io dia malalaka sy mihodina moramora, ary misy membranes antsoina hoe patagia eo anelanelan'ireo tongotra matevina sy tongony izay manompo toy ny "elatra" rehefa miala amin'ny hazo mankany amin'ny hazo ilay hoditra.
Ny halavany: eo anelanelan'ny 11 sy 12 santimetatra
Weight: eo 4 ka hatramin'ny 6,5 oz
Ny habetsaky ny alikadia manidina dia matetika hita ao anaty ala maitso matevina na mozika miorina misy ala honko, mavo mavo, siramamy siramamy, hemlock, ary serizy mainty izay mifandray amin'ny karazan-kazo mena sy balsam na Fraser fir. Io tantely io dia mipetraka matetika any amin'ny renirano sy renirano. Matetika izy io no mipetraka ao amin'ny vondron'olona kely ao amin'ny akany ao anaty lavaka hazo sy ny akanin'ny vorona taloha.
Tsy toy ny karazan-tsakafo hafa ny alika virjiny any avaratra, matetika no mihinana legioma sy fungi mitombo eny ambony sy ambany fa tsy mihinana voanio mafy. Mihinana voa koa izy, tsimokaretina, voankazo, kesika, bibikely, ary zavatra hafa.
Ireo maso lehibe sy maizimaizin'ireny ejipsianina ireny dia mamela azy ireo hahita hazavana kely, noho izany dia tena mavitrika izy ireo mandritra ny alina, mihetsiketsika eo amin'ny hazo sy ny tany. Tsy toy ny karnavaly hafa, ny Eglizy avaratr'i Virginia any avaratra dia mazoto miala amin'ny ririnina fa tsy miara-misakafo.
Ny feon'izy ireo dia mirakitra siramamy.
Tranobe 2 hatramin'ny 4 no teraka tamin'ny volana Mey sy Jona isan-taona.
Ny alikadia any avaratr'i Virginia ankehitriny dia misy any amin'ny ala maitso mavana any Highland, Grant, Greenbrier, Pendleton, Pocahontas, Randolph, Tucker, County Webster any Virginie Andrefana.
Ny fahaverezan'ny karazan-java-koditra mena tamin'ny faran'ny taonjato faha-20 dia nitaky ny lisitr'ireo hazondamosin'ny faritra avaratr'i West Virginia, araka ny Act Endangered Species tamin'ny taona 1985.
Tamin'ny taona 1985, tamin'ny fotoana nisioka ny endriky ny Endangered Species, dia 10 nohatsaraina ihany no hita velona tany amin'ny faritra efatra misy azy. Androany, mpikaroka biolojista federaly sy fanjakana no naka vongan-tsarobidy maherin'ny 1,100 tao amin'ny toerana maherin'ny 100, ary mino izy ireo fa tsy miatrika ny fandrahonana ho fongana intsony ity faneva ity.
Na dia niparitaka tsy ara-potoana nandritra ny vanim-potoana manan-tantarany sy ny fahamban-toetrany aza ireo karavasy, dia tapa-kevitra ny mponina ao aminy fa ho mafy orina ny US Fish and Wildlife Service. Ny lisitra dia mbola voatahiry ho tandindomin-doza amin'ny martsa 2013.
Antony mahatonga ny fitotongan'ny mponina
Ny fandravana habakabaka no antony voalohany mahatonga ny mponina hianjera. Any West Virginia , dia nihena be ny alavitr'ireo ala matevina Appalachian tamin'ny taona 1800. Natao ny hazo mba hamokarana vokatra vita amin'ny fitaovana sy fitaovana tsara (toy ny fepetra, gitara ary piano). Ny hazo dia tena sarobidy tokoa tamin'ny indostrian'ny fanorenana.
"Ny hany antony lehibe indrindra amin'ny fiverenan'ny mponina any an-kibon'ny tany dia ny famerenana indray ny toeram-ponenany tany an'ala," hoy ny tranokalan'i Richwood, WV.
"Raha mbola mitohy mandritra ny am-polo taona io fanavaozana ara-boajanahary io, dia misy ny tombotsoany sy ny fahalianany amin'ny alàlan'ny Forest Forest Amerikana Monongahela National Forest sy ny Faritra Atsinanan'i Northeastern, ny fanjakan'ny Diviziona Virginia any Virginie, ny Vaomieran'ny Ala sy ny State Park, The Nature Ny fikambanana fiarovana sy ny vondrona mpiaro hafa, ary ny vondron'olona manokana hanentanana tetik'asa fanarenana goavana izay mamerina ny tontolo voajanahary maitso ao amin'ny Allegheny Highlands. "
Hatramin'ny nilazana fa tandindomin-doza, ireo biolojista dia nametraka sy namporisika ny fananganana toby niorenan'ny birao fanatobiana tany amin'ny faritra 10 any andrefan'i sy atsimo andrefan'i Virginie.
Ireo vorona mpihaza ao amin'ilay hazondamosina dia owls, rambony, amboadia, tongo-bolo, saka, siramamy, baolina, hoditra, bibilava, ary saka.
Ahoana no azonao anampiana azy?
Tazomà any an-trano na ao anaty penina misokatra, indrindra amin'ny alina.
Manorata fotoana na vola an-tsitrapo mankany amin'ny Central Appalachian Spruce Restoration Initiative (CASRI).
Old World Affaires
Ny fototry ny fitsaboana ny mari-pandrefana
Ny toetra amam-behivavy lehibe valo
Afaka mahita saka ve ny saka?
Ny Aardvark: Mpihinam-bibikely Nocturnal
Hazo toy ny gilaika
Grey Wolf facts: Profile of the species Gray Wolf
Saola: Ilay Unicorn Endrika tandindonin-doza
Sary famantarana ny anjelin'ny anjely Angel for your Art angelic
Ahoana ny fampiasana ny teny hoe "Allons-y"
Ny kiraro, Family Coccinellidae
Capricorn Lalao (Transit) - Famirapiratana sy fahatsapana
Bakteria sy ny famoahana sakafo
Hihady Kalorie Kokoa kokoa noho ny Horohoron-tany Miely ny Skiing Downhill
Ny fomba fitantanana sy ny fanamarihana ny maitso maitso
Fitsaboana ATV, Fitsipika & lalàna avy amin'ny fanjakana
Ampirisiho ny zanakao hamaky teny
Hazavao ny fahasamihafana eo amin'i Jaona sy ny Filazantsaran'i Synoptic
Miaro sy miaro ny Fianakaviana sy ny harena sarobidy
Andinin-tsoratra masina momba ny fifanambadian'olona
Fanabeazana ao amin'ny Oniversiten'i Kentucky Atsinanana
Top Howard Jones Hira ireo '80 taona
Famaritana ny lalàna Charles
Caleb - Lehilahy iray nanaraka ny Tompo tamim-pahatsorana
Fitaovam-pandrefesana - Chemistry Glossary
Ireo sora-kevitra efatra ireo dia nanova tanteraka ny tantaran'izao tontolo izao
Cosmos Fizarana 5 Jereo ny asa
Ny fomba fampiasana ADN ny fikarohana ny havanao
Famoronana trano manan-tantara - Trends amin'ny fanorenana vaovao